တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | cincds
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ် H.E.Mr. Sun Guoxiang အား ယနေ့ ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုးမြင့်ထွန်း၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာအထူး ကိုယ်စားလှယ်နှင့်အတူ ကောင်စစ်ဝန် Mrs. Yang Shou Zheng နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့အကြား ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကို နက်ရှိုင်းစွာ အလေးအနက်ထား၍ ချစ်ကြည်ရေးနှင့် ဆက်ဆံရေး များ ပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးအခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ မူးယစ် ဆေးဝါးများနှင့် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှု တိုက်ဖျက်ရေးတို့ကို ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများ၊ ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် AA၊ TNLA၊ MNDAA အဖွဲ့များ၏ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကို တရုတ်နိုင်ငံက လက်မခံဘဲ ပြတ်ပြတ်သားသားကန့်ကွက်ရှုတ်ချသည့် အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများချုပ်ငြိမ်းရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် တပ်မတော်၏ရပ်တည်ဆောင်ရွက်ချက်များအား တရုတ်နိုင်ငံက ထောက်ခံအားပေးကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ တိုးတက်မှုရရှိရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများအား ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာအမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ အာရှရေးရာအထူးကိုယျစားလှယျ H.E.Mr. Sun Guoxiang အား ယနေ့ ညနပေိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး မိုးမွငျ့ထှနျး၊ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ အာရှရေးရာအထူး ကိုယျစားလှယျနှငျ့အတူ ကောငျစဈဝနျ Mrs. Yang Shou Zheng နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျ ကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့တရုတျနိုငျငံတို့အကွား ဆှမြေိုးပေါကျဖျော ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုနှငျ့ မဟာဗြူဟာမိတျဖကျဆကျဆံရေးကို နကျရှိုငျးစှာ အလေးအနကျထား၍ ခဈြကွညျရေးနှငျ့ ဆကျဆံရေး မြား ပိုမိုတိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျရေးအခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံနယျစပျဒသေတညျငွိမျအေးခမျြးရေး၊ မူးယဈ ဆေးဝါးမြားနှငျ့ တရားမဝငျကုနျသှယျမှု တိုကျဖကျြရေးတို့ကို ပိုမိုပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေား၊ ဩဂုတျလ ၁၅ ရကျတှငျဖွဈပှားခဲ့သညျ့ AA၊ TNLA၊ MNDAA အဖှဲ့မြား၏ အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုမြားကို တရုတျနိုငျငံက လကျမခံဘဲ ပွတျပွတျသားသားကနျ့ကှကျရှုတျခသြညျ့ အခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံအတှငျး လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခမြားခြုပျငွိမျးရေးနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျမြားအပျေါ မွနျမာနိုငျငံအစိုးရနှငျ့ တပျမတျော၏ရပျတညျဆောငျရှကျခကျြမြားအား တရုတျနိုငျငံက ထောကျခံအားပေးကူညီ ဆောငျရှကျပေးလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ ငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျမြား တိုးတကျမှုရရှိရေး ဆကျလကျဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေားအား ရငျးနှီး ပှငျ့လငျးစှာအမွငျခငျြးဖလှယျ ဆှေးနှေးခဲ့ကွကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။